Xagee baad ku kala qorataa Xumaanta iyo Wanaaga? Ka Faa’ideyso……… | GURIGA HAWEENKA
Home » Ila tali » Xagee baad ku kala qorataa Xumaanta iyo Wanaaga? Ka Faa’ideyso………
Xagee baad ku kala qorataa Xumaanta iyo Wanaaga? Ka Faa’ideyso………
Xagee baad ku kala qorataa Xumaanta iyo Wanaaga?
Laba nin oo saaxiibo ayaa ku socdaalay saxaraha, maadaama cadceedu aad u kululayd, haraad badana uu hayay waxay bilaabeen inay murmaan. Doodi ayaa ka xumaatay, mid ka mid ah ayaa dharbaaxay kii kale.
Kii la dharbaaxay ayaa aad uga xumaaday kana carooday xumaanta saaxiibkii sameeyay laakiin wuxuu go’aansaday inuusan aargoosi sameyn wuxuuna ciida ku qoray, “Maanta saaxiibkay ayaa wejiga iga dharbaaxay”
Socodkii ayay sii wateen ilaa ay ka gaareen meel biyo fadhiyaan (Balli) ninki la dharbaaxay ayaa biyihi ku booday si uu ugu qubeysto balse dhoobada oo jilicsaneyd darteed wuxuu bilaabay inuu quuso oo uu soo bixi waayo, saaxiibkii ayaa ka soo badbaadiyay oo banaanka keenay. Wuxuu dhagax ku dul qoray, “Maanta saaxiibkay ayaa nafteyda badbaadiyay”.
Ninki kale oo yaaban ayaa weydiiyay, markaan ku dharbaaxay ciida ayaad wax ku qortay, markaan ku badbaadiyay dhagax ayaad wax ku qortay. Maxaad ka waday?
Ninki ayaa ku jawaabay, “Goortii saaxiib na waxyeeleeyo ama na xumeeyo waa inaan ku qornaa ciida si dabeylaha ay u tirtiraan, marki saaxiib uu wanaag noo sameeyana waa inaan ku qornaa dhagax si uu weligii halkaa uga muuqdo.”
Nasiib darro, dad badan waxay xusuustaan oo keliya xumaanta oo meel adag ku qortaan, halka ay wanaaga qof u sameeyo si fudud ku hilmaamaan.
Halka aad ku qorato xumaanta laguu geysto iyo wanaaga laguu sameeyo waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa naftaada iyo noloshaada. Haddaba, Baro in waxyeelo kasta oo ku soo gaarta, dhib kasta oo ku soo marta, cadow kasta oo aad yeelato aad ku qorto Ciida si dabeylaha u tir-tiraan, si fududna aad ku hilmaanto una cafiso, Sidoo kale wax kasta oo wanaag ah, Abaal cid kuu gashay, noloshaada qof is-bedel u horseeday ku qoro meel adag, Qalbigaaga, halkaasoo dabeyl kasta aysan tiri karin, si fududna aadan ku hilmaamayn.
Mahadsanidiin dhamaan Asxaabta sharafta badan
La Wadaag Asxaabtaada ama ku mention-garee qof aad meel adag ku qorato wanaagooda
Previous: DAAWO: Haweeney Aad U Buuran Oo Dooneysa Inay Noqoto Qofka Ugu Buuran Dunida
Next: DHAGEYSO DHACDO XANUUN BADAN: Nin Xaaskiisa ku Gowracay Muqdisho